Paunorara Kwakakosha Kupfuura Nguva Yaunorara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Paunorara Kwakakosha Kupfuura Nguva Yaunorara
Vatsvagiri veZOE, kambani yezvehutano sainzi, pamwe nechikwata chepasi rose chevanozivikanwa kurara uye masayendisiti emetabolism kubva kuUK, US, Sweden, Italy, neSpain, vakaona kuti kutsauka kubva pamaitiro emunhu enguva yekurara (kureva, kuva nemaitiro asina kujairika. pakati pehusiku), pamwe nekuva nenguva yekurara gare gare, kazhinji, inosanganiswa nekusagadzikana kweglucose yeropa mhinduro mangwanani anotevera, izvo zvinogona kukanganisa hutano hwemunhu uye, zvakare, uremu hwavo.
Izvi zvitsva zvakawanikwa chikamu cheZOE PREDICT, chikuru chakadzama chikafu sainzi kudzidza munyika, uye zvakaburitswa nhasi mune inotungamira European magazine, Diabetologia. Sekudzidza kwakanyanya kwekurara kwerudzi rwayo - kwakakura zvakapetwa kagumi pane zvidzidzo zvinofananidzwa - zvakazarurwa izvi zvakabatanidzwa neZOE's innovative digital tekinoroji zvichagonesa kambani kupa mazano emunhu ekuvandudza hutano hwenhengo nehuremu.
• Kurara kwakakosha pakugadzirisa hutano hwemetabolism, uye kusanganiswa kwezvose zviri zviviri uye nhungamiro yekurara yakasarudzika ingangove yakakosha kuitira kuti vanhu vaderedze njodzi yechirwere chemetabolic, seshuga, BP (hypertension) uye kufutisa.
• ZOE PREDICT ndiyo chidzidzo chikuru chepasi rose chekuunganidza zvakadzama, ruzivo rwakadzama pakurara uye kudya kunovaka muviri. Ichi chidzidzo chekurara ndicho chikuru chekushandisa nhanho dzekurara, kuenderera mberi nekutarisa glucose uye yakajairwa metabolic dambudziko bvunzo.
• Kusarara zvakanaka usiku kwaienderana nekusaita shuga shoma pakudya kwemangwanani mangwanani aitevera, zvisinei nekuti munhu anosarudza kudya kwemangwanani.
• Kuva nekusagadzikana kwevhiki nevhiki kwekurara kwaibatanidzwa nekutadza kutonga shuga muropa, izvo zvinogona kutungamirira kumatambudziko ehutano kwenguva pfupi uye kwenguva refu.
• Zvakawanikwa muchidzidzo ichi zvinogona kudzidzisa nzira dzemararamiro ekuvandudza mazinga eglucose muropa mushure mekudya, achitarisa pamaitiro ekutanga nguva yekurara uye kuwedzera kurara kwemhando yepamusoro kusingapindiki.
Kurara zvakanaka kwagara kuchizivikanwa sechikamu chikuru chemararamiro ane hutano. Kunyangwe kuti kurara kunoenderana sei nekudya uye kuita zvemuviri, hazvina kunyatsojeka. Kutaura zvazviri, vatsvakurudzi vakamboona kuti kurara zvakashata kana zvishoma zvakanyanya kunobatanidza nehurombo hwehuga hwehuga muvanhu vane chirwere cheshuga asi kuti hukama uhwu hwakachengetwa sei muvanhu vane hutano hwakanga husingazivikanwi kusvikira zvino. Chikwata cheZOE chevaongorori chakashandisa data kubva kuchidzidzo cheZOE PREDICT, uko vazvipiri vane hutano makumi mapfumbamwe nevatatu vakateverwa mukati memavhiki maviri. Munguva iyi, vatori vechikamu vakadya kudya kwakasiyana-siyana, uye vakapfeka glucose yeropa uye vatariri vekufamba kuti vaone mhinduro dzavo dzehuga uye kurara (chinyorwa: kurara hakuna kushandiswa pakuedza).
Masayendisiti akayera nguva yose kubva panguva iyo vatori vechikamu vakaenda kunorara kusvika panguva yavakamuka, pamwe chete nehutano hwavo hwekurara. Vakazoongorora marariro evanhu kwemavhiki maviri, ndokuaenzanisa nemhinduro dzeshuga yeropa pakudya zvine huwandu hwakasiyana hwemakhahydrates, mapuroteni nemafuta.
Kuburikidza netsvakiridzo yavo, masayendisiti akawana kuti kune vese vatori vechikamu, kuenda kunorara pamberi pekurara kwenguva refu kunogona kuve nani kune hutano hwemetabolism - iyo inoyerwa nenhevedzano yezvinhu zvinoratidza hutano hwauri ikozvino, pamwe zvingangoita sei kuti uve nechirwere chisingaperi chakakomba gare gare muupenyu. Vatori vechikamu vakaenda kunorara gare gare vaiwanzova nemhinduro dzakaipa dzeshuga yeropa pakudya kwemangwanani zuva raitevera, kunyangwe vakanonoka kumuka, zvichienzaniswa nevanhu vakarara kwenguva yakafanana asi vakaenda kunorara kare manheru.
Pamusoro pezvo, iyo data yakaratidza kuti kuvhiringika kurara kwehusiku kwaive kwakabatana nemhinduro shoma yeshuga yeropa pakudya kwemangwanani zuva raitevera. Neimwe nzira, pamunhu ega, kuomerera kumararamiro emunhu akajairwa kurara uye kunzvenga nguva dzehusiku zvisina kujairika kwakatungamirira kumhinduro ine hutano yeshuga yeropa pakudya kwemangwanani anotevera mangwanani. Izvi zvakakosha nokuti mhinduro dzisina kunaka dzehuga mushure mekudya dzakabatanidzwa nehuwandu hwekuwedzera kwechirwere cheshuga 2 kana chirwere chemwoyo.
Kupfuurirazve, kuva nemaitiro asina kujairika evhiki nevhiki yekurara pamwe nekusaenderana nenguva dzekurara uye kusiyanisa nguva yekurara kwaibatanidzawo nekuderera kwekudzora shuga yeropa. Izvi zvinogona kubatsira kutsanangura 'social jetlag,' iyo inounzwa nekuchinja kwechirongwa chekurara icho vanhu vazhinji vanosangana nacho pamazuva avo ekuzorora, zvichienzaniswa nemazuva ekushanda, uye yakaratidza kuve yakabatana nehutano husina kunaka, kushata, uye kuwedzera. hope uye kuneta.
Pakupedzisira, boka racho rakaona kuti mafuta akakwirira uye kudya kwekabhohaidhireti kwakakwirira kwakatungamirira kune zviri nani kudzora mhinduro dzeshuga yeropa pane kungova nechinwiwa chine shuga. Kuwana uku kunogona kuve kwakakosha kune vanhu vanotendeukira kuzvinwiwa zvesimba kana zvihwitsi zvemangwanani seyekunhonga-mushure mehusiku. Kana ichidzokororwa nguva nenguva, mhinduro dzisina kunaka dzeglucose dzinogona kusimudza njodzi yehutano hwemetabolism hwakadai seshuga, kufutisa uye chirwere chemoyo. Nekudaro, kuchengetedza huwandu hweshuga yeropa chikamu chakakosha chekugara uine hutano uye chikamu chakakosha chechirongwa cheZOE nekuda kweichi chikonzero.
Mhedzisiro iyi inosimbisa basa rakakosha rinoitwa nekurara mukurarama kwemunhu uye kugona kuwana mararamiro ane hutano, pamwe nekukosha kwekurara kwakakwana, kwemhando yepamusoro uye kukosha kwekudzima mwenje pazvinogoneka.
Mutsvakurudzi anotungamirira pakuongorora uye nhengo yeZOE Scientific Advisory Board, Purofesa Paul Franks weLund University kuSweden, akati: “Kuvanhu vakawanda, zvose zviri zviviri nguva yokurara uye nguva zvinhu zvinochinjika, naizvozvo kuva asingarari, kana kuti kuva nerudungwe rwakakanganisika rwokurara. zviri kwatiri kuti tichinje." Franks akawedzera kuti, "Kukwereta kubva panguva yako yekumuka uye kuunganidza zvikwereti zvekurara hazvimboitwe pasina kuunza mhindu. Kunyange usiku humwe chete hunotapura nzira iyo miviri yedu inogadzikisa nayo zvokudya uye kuti mwero weshuga yomuropa unodzorwa zvakanaka sei.”
Dr. Sarah Berry, muverengi wezvidzidzo zvinovaka muviri muDepartment of Nutritional Sciences paKing’s College, London, uye Lead Nutritional Scientist kuZOE, vakabvuma kuti, “Kurara imbiru inokosha yeutano pamwe chete nezvokudya, kurovedza muviri uye utano hwepfungwa. Asi, munhu mumwe chete muvatatu haakotsi zvakakwana. Vanhu vasingarare zvakakwana vane 40 muzana panjodzi yekufutisa uye vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chemoyo neshuga. Vanhu vamwe chete ava vanowanzodya macalorie akawanda, vanosarudza svutugadzike zvisingavaki muviri, vane zvishoma zvakasiyana-siyana mukudya kwavo uye vane kudya kwakashata kuine fiber shoma nemichero nemiriwo. Muchidimbu, chidzidzo chedu chinoratidza kuti kurara kunofanira kunyanya kutariswa.”
Tim Spector, sainzi muvambi weZOE uye purofesa wegenetic epidemiology paKing's College London, akati, "Sezvinoita nezvekudya, hapana nzira imwe chete yekukurudzira maawa edu ekurara. Asi, ikozvino tinogona kuratidza kuti pane nzira inokurudzirwa yekuti tinorara rinhi uye sei. ” Spector akaenderera mberi achiti, “Kuti vanhu vanzwe kusimbaradzwa uye vane chivimbo mukukwanisa kwavo kutora matanho nehutano hwavo, dzidzo yakakosha. Tsvagiridzo yedu yekumusoro yakasanganiswa neruzivo rwemunhu rweZOE inotibatsira kusangana nevanhu chero kwavanenge vari parwendo rwavo uye kuvapa nzira inotsigirwa nesainzi kuti vawane shanduko uye kubudirira. "
5 Sainzi-Backed Sleep Tips to Support Metabolic Health
• Rongedza Kusawirirana: Gadzira muitiro wekurara unoshanda uye ramba uchiomerera kwairi vhiki rose.
• Kurumidza Kuchengeta…neMubhedha Wako: Kurumidza kunorara manheru ega ega pane kurova hwihwidza mangwanani anotevera.
• Ronga Mamiriro Ezvinhu: Iva nechokwadi chokuti imba yokurara yakanyarara, ine rima uye inotonhorera, dzivisa kudya nokunwa pakati pousiku, uye ronga nguva yakakwana yokumbozorora uye kuzorora usati warova uswa.
• Tangai Zuva Nemazvo: Zvakabuda muongororo yeZOE yePREDICT zvinoratidza kuti chinodya munhu chakakosha sezvakangoita kana munhu adya. Sezvo mhedzisiro yechikafu ichisiyana zvakanyanya pakati pevanhu, tora chikafu chemangwanani chine hutano kumuviri wako (funga: michero nemiriwo) pane yakakwira-carb yemangwanani yekusimbisa simba rakanakisa mangwanani.
• Ziva Muviri Wako: Tora bvunzo yakazara inoratidza kuwanda kwe "akanaka" uye "akaipa" mabhakitiriya mumatumbo ako ane hukama nehutano hwemetabolism, pamwe neshuga yeropa neropa reropa mhinduro kune chikafu kuitira kuti ugone kutora kutonga kwako. hutano hwako.